Afaka Hahitanao ny Tena Fitiavana Online?
amin'ny Julie Ritchie
Vao folo taona lasa izay an-tserasera ny zava-Unheard mampiaraka ny, ary ireo izay no mahalala ny momba izany nihevitra fa hafahafa ny tranga ho an'ny tena 'avy ao' karazana na mahakivy ny olona izay tsy afaka mahazo daty 'ny fomba ara-dalàna'.
Inona no fotoana efa niova! Online mampiaraka ny mahazatra izao ho be atao, asa-tsaina ny olona, na izany aza dia tsy ny olona be atao fotsiny izay efa nitsambikina teo amin'ny aterineto mampiaraka fiaran-dalamby – Tsy ô! Ny olona rehetra avy amin'ny mpitondratena varavarana manaraka ny Dadatoa Sam toa ho any izany! Ny antitra sy ny tanora, ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny saranga samihafa, fivavahana, firazanana sy ny fiaviana manao izany. Online mampiaraka dia niova zavatra izay ihany no 'fo irery' mety hihevitra, ho lasa zava-dehibe ny fomba mahazatra ny daty. Na dia ny tsara tarehy, mahomby ny olona manao azy io, tsara miaraka amin'ny hafa rehetra! Satria tonga saina rehetra fa tena mora dia! Ao amin'io vanim-potoana anaty aterineto dia voajanahary fivoarana.
Ka inona no mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka ao amin'ny Internet, ary mampiaraka Tena Afaka manantena ny hahita ny tena fitiavana izany?
Tsara ny mahatsara ny sasany dia mazava be. Azonao ny fidirana amin'ny olona maro kokoa noho ianao dia ho afaka ny hihaona amin'ny mampiaraka na inona na inona ny fomba nentim-paharazana. Ary mbola izany ihany koa dia afaka miaraka amin'ny fanindronan'ny any amin'ny rambony, izay midika fa misy olona maro izay dia ho afaka ny hahita anareo izay mety tsy mazàna te hifandray amin'ny. Koa misy anankiray be ny 'haingana turnover' izay mety hitranga amin'ny aterineto mampiaraka, izay raha tsy namboariny ho azy, dia afaka mamela ny olona mahatsapa tena kivy.
Inona no holazaina amin'ny hoe 'haingana turnover'? Eny mety ho miresaka amin'ny olona indray andro, afa-tsy izy ireo hanjavona tanteraka eny ny Radar manaraka. Izany no tena fahita. Dia mandefa e-mail avy fa tsy hahazo namaly ny sy ny mety dia ho manana ianao na tsy hamaly ny. Tsy lavitra noho ny sasany tsy manokana ny fomba nentim-paharazana ny hoe mampiaraka sy manahirana izao ny olona sasany. Nahamarika izany aho toa namely mafy kokoa ny zokiolona taranaka, araka izay zatra ny kokoa mahalala fomba fanao nentim-paharazana mampiaraka, izay ohatra ianao hilaza olona iray raha tsy te hampiaraka azy ireo indray, ary marina dia tsy toy izany amin'ny aterineto (na dia mieritreritra isika dia tokony ho).
Na izany aza, raha afaka manaiky ireo mahay manavaka kely, Mieritreritra aho fa mety ho fitaovana lehibe mifandray amin'ny olona, ary eny na dia noho ny fitadiavana ny fitiavana.
Mazava ho azy fa misy zavatra kely tsy tantaram-pitiavana sy kokoa 'ofisialy' ny miresaka amin'ny e-mail, na izany aza dia mety ho resabe mba hahitana izay e-mail sy hiresaka azonao amin'ny tombontsoa mety ho fitiavana. Ary mazava ho azy raha toa ianao mametraka ny tena 'ao amin'ny olona' mampiaraka dingana, ny olon-tiany dia afaka mora foana manasongadina kokoa dia.
Ianao koa mba ho vonona ho amin'ny zava-misy fa dia mety hihaona olona maro izay dia tsy raiki-pitia amin'ny – Raha ny marina mety tsy ho tahaka azy ireo! Ny olona iray dia afaka mamoaka profil be fa ny hifanandrina aminy tao an tena izao tontolo izao ny fifandraisana marina dia tsy misy. Koa mitandrema, satria misy scammers an-tserasera, ny olona izay tsy tena sy ireo fotsiny mba hiezaka ny scam ny vola na ny tsipiriany manokana. , Tsy dia mahazatra loatra amin'ny zavatra niainako, fa mbola ao ihany ireny ao amin'ny mifangaro. Misy ihany koa ireo olona izay fotsiny 'ny fananana mahafinaritra', olona izay mitady firaisana ara-nofo amin'ny aterineto, ary na dia ny olona sasany izay manambady. Na izany aza, raha afaka hiatrehana izany fa tsy hahazo de-Nandrisika, dia azo antoka fa afaka hihaona olona iray amin'ny aterineto izay tonga lafatra ho anareo, ary iza indray no mihaona ny amin'ny tena fiainana, dia afaka mizara tena fitiavana. Fantatro ny maro ny mpivady mahomby izay nihaona izany.
Tsarovy fotsiny aza, mandra-nihaona azy amin'ny olona dia tsy tena.
Izany Real Fiainana = tena fitiavana.
Ary indray mandeha ihany ianao no maka azy sy ivelan'ny aterineto ho tena fiainana fa tena fifandraisana Afaka ny ho feno fitiavana fifandraisana.
5 Actionable Soso-kevitra mba hisarihana ny vehivavy ny Dreams
Ahoana no Manoroha amin'ny 5 Easy Dingana
7 Firaisana ara-nofo zava-misy Izay Tsofy ny sainao
6 Zava-dehibe Men Eritrereto mandritra ny Firaisana
7 Hevi-diso Momba ny Firaisana
Member Safety no ny Top Priority
7 Fahadisoana ratsy Vehivavy hanao izany bato i Izay mety ho vintana fifandraisana
Ahoana no daty Facebook
5 Fahadisoana Men Ataovy fa mety hanimba ny fifandraisana
+ Mampiaraka any United States
+ Mampiaraka any Angletera
+ Mampiaraka in Kanada
+ Mampiaraka any Aostralia
+ Mampiaraka any Irlandy
+ Mampiaraka any Nouvelle-Zélande
+ Mampiaraka any Afrika Atsimo
© Copyright 2017 Date My Pet. Nataon- amin'ny 8celerate Studio
Winter Date Hevitra
Maro ny mpivady Mety ho sarotra kokoa ho tonga amin'ny daty mahafinaritra ny hevitra, rehefa mangatsiaka, manorana, ary, indraindray,...